Ikea Lottorp သို့မဟုတ် Klockis နာရီများကိုဖြုတ်ခြင်း - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> အိုး၏အီလက်ထရောနစ်နှင့်စက်မှုပြန်လည် >> Ikea Lottorp သို့မဟုတ် Klockis နာရီများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း
အဲဒါကိုLöttorp (သို့) Klockis လို့ခေါ်တယ်၊ ငါသူတို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီထင်တယ် ရိုးရိုးနာရီ၊ alarm, timer နှင့် thermometer ဖြစ်သည် သူက Ikea မှာ€4ဒါမှမဟုတ်€5နဲ့ရောင်းပါတယ်။ တစ် ဦး အတွက်တစ် ဦး က4။ မီးဖိုချောင်၊ ခန်း၊ စသည်တို့၌၎င်းကိုထားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီနာရီရဲ့ကောင်းတဲ့အရာကအသုံးဝင်မှုရှိတာကြောင့်လည်ပတ်မှုပုံစံတွေကိုပြောင်းဖို့အလွန်လွယ်ကူတယ်၊ နာရီကိုလှည့်ရမယ်။ ထို့ကြောင့်သင်လှည့်ပါကကွဲပြားသောတိုင်းတာမှုများသည်ပြသမှုတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ငါ့သမီးတွေကဖမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါရူးသွားတယ်။ အလှည့်တစ်ခုစီတိုင်းသည် Beep လုပ်၍ မတူညီသောအရောင်တစ်မျိုးပေါ်လာသည်။
ငါများသောအားဖြင့်သူတို့ကိုဖြုတ်တပ်ဖို့ပစ္စည်းတွေမဝယ်ဘူး၊ အမှိုက်ပုံးဒါမှမဟုတ်အအေးခံပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားယူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ငါမခံနိုင်ဘူး။ အဲဒါကိုကိုင်ပြီးငါအရမ်းစပ်စုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒီ display ကို Arduino နဲ့သုံးလို့ရမလား။ အပူချိန်တိုင်းတာရန်နှင့်အနေအထားပြောင်းလဲမှုကိုသိရှိရန်မည်သည့်အာရုံခံကိရိယာကိုအသုံးပြုမည်နည်း။ နာရီကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ် hack တစ်ခုရှိပါသလား။ ဒါပေမယ့်အားလုံးထက်အရေးကြီးတာကငါ့ကိုစိတ် ၀ င်စားဖို့ကောင်းတာကသင်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြားနေရတဲ့ဆူညံသံလျော့နည်းတာကဘာလဲ။ ဘာလို့အထဲမှာချောင်နေတာလဲ ထိုအနာရီထဲမှာ, ဒါပေမယ့်အားလုံး၌မ။
€ 5? နေဆဲစျေးပေါအစိတ်အပိုင်းများအရင်းအမြစ်? In အမေဇုံကသူတို့ကို ၁၃ ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းလိုက်တာဆိုင်၌ မင်းယူရို ၅ အတွက်ရတယ်
မြင်ကွင်းပေါက်ကွဲမှု (သို့) နာရီကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲ
ငါကလွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်စဉ်းစားနာရီရှေ့၌ရပ်နေ၏။ သို့သော် Ikea မှသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပစ္စည်း၏အတွင်းပိုင်းများကိုမမြင်တွေ့လိုကြပုံရသည်။ ဝက်အူမရှိ၊ tab လည်းမရှိ၊ အလွှာတစ်ခုလုံးကတစ်လုံးတည်းမဟုတ်ဘူး။ ငါကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှေ့ဖက်ပဲကျန်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့နှလုံးထဲမှာနာကျင်မှုတွေအားလုံးငါအဲဒီကိုသွားနေတယ်၊ ​​ဒါကိုလုပ်ဖို့တကယ်လိုအပ်လား။
မင်းကိုပေါက်ကွဲတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုထားခဲ့မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတည်းဖြတ်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်။ ငါရရင်ငါပေါင်းမယ်။ အမှန်တရားကတော့မသန့်ရှင်းသေးဘူး ။- (ငါမလိုအပ်ဘဲအပိုင်းအစတစ်ခုကျိုးပဲ့နေတယ်၊ ​​နောက်တစ်နည်းရှိရင်စဉ်းစားဖို့မရပ်မနားဖိအားပေးခံနေရပြီလို့ထင်တယ်။ ဗွီဒီယိုကိုချက်ချင်းမရပ်တန့်နိုင်အောင်မှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိဘူး။ အပြေးအလွှားဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ အကြံပေးကောင်း
သငျသညျလိုလျှင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာဖြုတ်ပါ နောက်အဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
သင်က frame တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့စတစ်ကာတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ ဝက်အူလှည့်ရှာနေတဲ့ကွက်လပ်တစ်ခုရှိသည်။ သင်ကတူးတယ်၊ ဝက်အူတွေရှိတယ်။
အောက်ပါပုံတွင် - ဘယ်ဘက်ရှိအပိုင်းအစနှစ်ခုကိုကြည့်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်စွာဖြိုခွဲရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်.
ပြီးတာနဲ့သင်က disassemble ဖို့ဘယ်လိုမြင်ကြပြီ။ ငါနှိုးစက်နာရီ၏အသေးစိတျထားခဲ့ပါ။ တစ်ခုလုံးကတော်တော်လေးရိုးရှင်းပြီးအသုံးဝင်တဲ့အရာများစွာကိုအမှန်တရားမမြင်ပါဘူး။ သို့သော်ဆူညံသံဖြစ်စေသည့်အဖြူရောင်ဘူးလေးသည်သရဖူတွင်ရတနာဖြစ်သည်။
ငါဘာကြောင့်ဆူညံသံတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့ကြည့်တယ်။ က စက်မှုအနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာ။ နာရီတစ်လုံးသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုပြသရန်နာရီ၏အနေအထားကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ ပုံတွင်အလျားလိုက်ဖြစ်သော်လည်းအမှန်မှာ၊ နာရီသည်ဒေါင်လိုက်သွားသောကြောင့်သံမဏိဘောလုံးသည်ဆိပ်ကမ်းတစ်စုံကိုအမြဲထိမိစေသည်။ ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းကိုလိမ္မာပါးနပ်တဲ့နည်းနဲ့စီမံကိန်းများစွာအတွက်ပုံတူကူးယူလို့ရတယ်။
နာရီကိုလှည့်တိုင်းဖန်သားပြင်နှင့်အရောင်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒါလုပ်ရုံပါပဲ RGB ဦး ဆောင်သည့်အလင်းရောင်
အဆိုပါ Beep ကို Hack သို့မဟုတ်အလှည့်နှင့်အတူဆူညံသံအောင်ရပ်တန့်စေရန်မည်သို့
Lottorp ရဲ့အဆုံးမှာငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုငါစတင်ရှာဖွေခဲ့တယ်။ သတင်းအချက်အလက်သိပ်မရှိဘူး၊ ပြောစရာမလိုဘူး၊ ရည်ညွှန်းချက် ၂ ခုမှ ၃ ခုသာရှိနိုင်သည်၊ ဟုတ်ကဲ့၊ အသုံးဝင်သော hack တစ်ခုသို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိရင်၊ အဲဒါကိုသင်ဖွင့်တိုင်းတိုင်းကအသံထွက်တာပေါ့။ မနက်စောစောမှာသင့်မှာအပူချိန် mode ရှိပြီးအချိန်ကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုပါစို့။ သင်ဖွင့်သောအခါအလင်းသည်ဖွင့်ပြီး၎င်းသည် beeeep ဖြစ်သည်။ အရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီးသင်၏အခန်းဖော်များနိုးနိုင်သည်။ ဒါကိုသူတို့ဖြေရှင်းပြီ
Coursera Machine Learning သင်တန်းပြီးဆုံးပါပြီ
7 မှတ်ချက်များ "Ikea Lottorp သို့မဟုတ် Klockis clock ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း" အပေါ်မှတ်ချက်
2:2018 pm မှာဇန်နဝါရီလ 10, 05
ငါကအားလုံး (အကြီးအလက်တစ်ခုတည်း) အားလုံးအဆင်သင့်မဖြစ်သေးပေမယ့်ငါကသင်၏ post ကိုလွဲချော်နှင့်အစဉ်မပြတ်ငါကသူတို့ကိုဖတ်ရှုခြင်းကောင်းသောအချိန်ရှိသည် .. ငါသင် 2018 ခုနှစ်တွင်ပြေးပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ကြောင်းပြောရမယ် .. :)
2:2018 pm မှာဇန်နဝါရီလ 10, 17
သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမြဲတမ်းတကယ့်ကိုတန်ဖိုးထားကြတယ်။ :) ၂၀၁၈ ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုကြည့်ကြစို့၊ အလုပ်နှင့်မိသားစုသည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုနှုန်းနှင့်အမီလိုက်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်
ငါတကယ်သိချင်တာကပေါင်းစည်းထားတဲ့ (uC) ဟာအနက်ရောင် glob အောက်မှာရှိတယ်။
11:2018 pm မှာဇန်နဝါရီလ 12, 55
ကောင်းပြီ၊ မင်းကိုငါကူညီနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး ။-(
20:2020 pm မှာပြီလ 6, 54
အလွန်အသုံးဝင်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါဒီနာရီကိုဖြုတ်ဖို့လိုတယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုမဖျက်ဆီးနိုင်အောင်တားဆီးပေးခဲ့တယ်
22:2020 pm မှာပြီလ 8, 25
16:2021 pm မှာအောက်တိုဘာလ 9, 38
မင်္ဂလာပါ၊ RGB မီးကိုအမြဲဖွင့်နိုင်ပုံကိုငါသိချင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါနှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။